सर्वोच्चले शपथ नगराउन भनेका व्यक्ति कसरी अर्थमन्त्री ? – Makalukhabar.com
सर्वोच्चले शपथ नगराउन भनेका व्यक्ति कसरी अर्थमन्त्री ?
“काठमाडौं, फागुन १४ । नेपाल तरुण दलले डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले सर्वोच्चले शपथ नगराउन भनेका व्यक्ति कसरी अर्थमन्त्री नियुक्त गरिए भन्दै प्रश्न सोधेको छ ।
तर संविधानमा संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्ने तर त्यस्तोे व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न रोक लगाएमा पनि खतिवडाले संविधान अनुसार ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।”